Texas Chainsaw 3D (2013) [Unicode]Texas Chainsaw ဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ Stephen Suscoရဲ့ဇာတ်ညွှန်းကို Director -Jhon Luessenhopက 3D Effectဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကတော့ အမေရိကန်ရဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီး အချောအလှလေး Alexandra Daddario ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင်တော့ ဆော်ရာမိသားစုတစ်စုရဲ့ဆိုးရွားစွာ မိုးလောင်တိုက်သွင်းခံရရာမှ အသက်ရှင်လျက်ကျန်နေသော ကလေးမလေးကို လင်မယားနှစ်ဦးက မွေးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကောင်မလေးအသက်ကြီးလာတဲ့အခါ သူ့မိဘအရင်းမဟုတ်မှန်းသိတဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့မိဘအရင်းတွေနေခဲ့တဲ့အိမ်ကို အတင်းမေးကာ သူ့သူငယ်ချင်းများနှင့် သွားခဲ့ရာမှ ... ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်သွားမလဲ... ထိုအိမ်ကြီးထဲတွင် အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူမှာ သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ခဲ့ပါ...ဒီဇာတ်ကားကတော့ သတ်ဖြတ်မှု့များ ၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာများကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် သဲထိပ်ရင်ဖို ကြည့်ရှု့ရမယ့် Horror , Thriller ဇာတ်ကားဖြစ်သည့်အပြင် Alexandra Daddarioရဲ့အလှအပကိုလည်း ခံစားရနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ File size…1.4Gb / 900MB Quality…1080p BluRay 5.1Ch / 720p Format…mp4 Duration….01:31:43 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translated by Khin Chan Myae TunEncoded by Naing Aung Latt & YK
The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) The Lord of the rings နဲ့ The hobbit ရုပ်ရှင်တွေဟာ Fantasy လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်လောကမှာ မရှိတဲ့ ပုံပြင်တွေ ဒဏ္ဍာရီတွေ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် အချို့ Fantasy ရုပ်ရှင် စာအုပ်တွေဟာ အပြင်လောကနဲ့ ရောမွှေထားတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ - နာနီယာ၊ ဟယ်ရီပေါ်တာ၊ ပါစီဂျက်ဆန် စသည်ဖြင့်ပါ။ဒါပေမယ့် ဒီ ဇာတ်လမ်းတွေကိုတော့ စာရေးဆရာကြီး J.R.R.Tolkien ကအစအဆုံး ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာပါ။ နတ်သူငယ်တွေ၊ လူပုတွေ၊ ဘီလူးတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကို တီထွင်ခဲ့တယ်။ မူရင်းစာအုပ်တွေမှာ မြေပုံအပြည့်အစုံနဲ့ ရေးသားခဲ့တယ်။ သမိုင်းတစ်ခုလုံးကို ပြက္ခဒိန်ပါ ဖန်တီးပြီး ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စာသားတင်မက ကဗျာတွေ သီချင်းတွေပါ ရေးဖွဲ့ခဲ့တာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးဏှောက်တစ်ခုထဲကနေ စကြဝဠာတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။စာအုပ်ကိုအသာထားပြီး ရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုပဲ ပြောကြပါစို့။ The Lord of the ...
The Great Gatsby (2013) The Great Gatsby (2013)(၁)တစ်စထက်တစ်စ ဝင်းပလင်းဖြာလာတဲ့ လရိပ်အောက်က... လူသူကင်းမဲ့ရာ ကမ်းဆိပ်စွန်းတံတားပေါ် ကျွန်တော်ရပ်နေခဲ့တယ်။ ဟိုတစ်ဖက်ကမ်း တုရှုက အမှောင်ရိပ်ထဲမှာတော့... အလင်းပွင့်စိမ်းကလေးဟာ တောက်ပတစ်လှည့် မှိန်ဖျော့တစ်လှည့်နဲ့ နီးလာသလိုလို... ဝေးသွားသလိုလို...။(၂)ဒီအလင်းပွင့်စိမ်းကလေးဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကျွန်တော်ဉာဏ်မမီနိုင်ပါတဲ့ လောကကြီးရဲ့ အမှတ်သညာပါပဲ။ ဂတ်စ်ဘီအတွက်တာ့ မတူခဲ့ဘူးပေါ့။(၃)ကျွန်တော်လူရည်မလည်သေးခင် လူမမည်ဘဝမှာ အဖေက ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမခဲ့ဖူးတယ်။ " သူများကို ဝေဖန်မယ်တွေးတိုင်း လူတိုင်းက မင်းလိုမျိုး လောကရဲ့မျက်နှာသာပေး မခံခဲ့ရဘူးဆိုတာကို သတိရ"တဲ့။ ဒီစကားကြောင့် ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ ကိုယ့်ဘက်ကအမြင်နဲ့ အကဲဖြတ်ဝေဖန်လေ့မရှိပေမဲ့ ဂတ်စ်ဘီကိုတော့ ကျွန်တော်အကဲဖြတ်စောခဲ့မိတယ် ထင်ပါတယ်။ အဖေ့ဆုံးမစကားက သိပ်မှန်ခဲ့တယ်။(၄)မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာ ဘာများလဲ။ ဒါမျိုးအမေးက အဖြေတိတိပပရှိတဲ့ အမေးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ သို့ပေမဲ့ ဂတ်စ်ဘီအတွက်တော့ မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာ ဒီအလင်းပွင့်စိမ်းကလေးပါပဲ။ လဲကျလိုက် တစ်စစီပြန်ကောက်လိုက် ဘဝမှာတောင် ဒီမျှော်လင့်ချက်ကလေးကို ဂတ်စ်ဘီ မစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါဘူး။ ...
Iddarammayilatho (2013) Iddarammayilatho (2013)အညွှန်းဇာတ်လမ်းစဖွင့်ပုံက... နိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ကုဋေ တစ်သိန်းတန်လာဘ်စားမှုကြီးတစ်ခုအကြောင်းကို IAS အရာရှိတစ်ယောက်ကဝန်ကြီးကို မေးမြန်းပြီး ၊ အဲ့ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းပေးဖို့ ဝန်ကြီးကIAS အရာရှိကို တာဝန်ပေးလိုက်ရာက စဖွင့်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ ဝန်ကြီးရဲ့သမီး နိုင်ငံခြားကိုစိတ်ပညာဘွဲ့လွန်သွားတက်တာကို ပြပါတယ်။ဒါက ဇာတ်လမ်းရဲ့ နိဒါန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ဒီနောက်တော့ ဝန်ကြီးသမီး အာကန်ရှာဟာ ပြည်ပမှာ ကောလိပ်တက်ဖို့အဆောင်တစ်ခုကို ရောက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီအဆောင်က သူတည်းခိုတဲ့အခန်းထဲကနေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုတွေ့လို့ဖတ်ကြည့်မိရာကနေ ဒီဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးဟာ ရုပ်လုံးပေါ်လာတော့တာပါပဲ။တစ်ချို့က ကြည့်ဖူးကြပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ မကြည့်ဖူးလောက်ပါဘူး။ဇာတ်လမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင် ဇာတ်အိမ်ကို အားမရပေမယ့် တေလဂူးဇာတ်ကားလေးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်း ၊ ဟာသခန်းလေးတွေ ညှပ်ထည့်ထားပုံကဇာတ်လမ်းကို မြူးကြွစေပြီး ၊ တေလဂူးမင်းသမီးလေးတွေရဲ့ ညုတုတု အမူအရာ ၊သရုပ်ဆောင်ပုံလေးတွေက အသည်းယားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။မိသားစုနဲ့ အတူ ကြည့်နိုင်သလို ၊မိမိရဲ့ ရည်းစား ၊ မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့လည်း အတူကြည့်ရင်း အချစ်တွေပိုတိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ ...
Firestorm (2013) Firestorm (2013)Firestorm ဟာ ကိုးဆယ်ခုနှစ်ဟောင်ကောင် ရဲအက်ရှင်ကားတွေဟန်မျိုးရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး အက်ရှင်ပရိသတ်တွေ စိတ်မပျက်ရအောင် အက်ရှင်ခန်းတွေ ဆက်တိုက်သလို ထည့်သွင်းထားတဲ့ကားပါ။ Infernal Affairs လို ရဲတွေနဲ့ ဒုစရိုက်သမားတွေကြားက လောဘတွေ အတ္တတွေကို နှစ်ဖက်လုံးပုံဖော်ထားတဲ့ကားလို့လည်း ဝေဖန်ရေးသမားတွေက ဆိုပါတယ်။"ပြည်သူ့တာဝန်ကို ကြည်ညို ဥပဒေကို လက်ကိုင်ထားပါ" တဲ့။ ဒါပြည်သူ့ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့ အရာရှိ လူမင်းချင်ရဲ့ လက်ကိုင်စကားပါ။"ရဲလောကမှာ အရက်သမားတွေ လောင်းကစားသမားတွေ ပုံနေသလို မုဆိုးမဖြစ်သွားတဲ့ မိန်းမတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့ ဒီအလုပ်ကို ဘာလို့ဆက်လုပ်နေလဲဆိုတော့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေ မသေစေချင်လို့ပဲ"တဲ့။ဒီလိုမျိုး တာဝန်သိတဲ့ စုံထောက်လူမင်းချင်နဲ့ ငွေအားလူအား တောင့်တင်းတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်အားပြိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူတွေက မြေစာပင်ဖြစ်ကျန်ခဲ့မလဲ ဘယ်သူတွေကို ပေးဆပ်ပြီး အဲ့ဂိုဏ်းကြီးကိုဖြိုခွင်းရမှာလဲ စသည်ဖြင့် အပစ်အခတ် ဒရာမာစုံလင်စွာနဲ့ ကြည့်ရှုရမဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့ ...
Baby Blues (2013) Baby Blues (2013)2013ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ ခြောက်ခြောက်ခြားခြားhorrorကားတခုပါပဲ လူတိုင်းလိုလိုကြားဖူးကြမှာပါကျွန်တော်တို့တွေ တနေရာရာကို ပြောင်းရွေ့ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာမှာ မကျွတ်မလွတ်ပရလောကသားတွေ ရှိတက်ပြီးသူတို့ရဲ့အစွဲအလမ်းရှိရာ အရာဝတ္ထုတခုခုမှာ တွယ်ကပ်နေတက်တာကိုပေါ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကလဲ အဲ့ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးကိုကျောရိုးခံထားပါတယ်.ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့လူငယ်စုံတွဲတတွဲဟာ ဈေးသက်သာတဲ့အိမ်တလုံးမှာ အတူနေထိုင်ဖို့ ငှားရမ်းပြီးရွေ့ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲထူးခြားတဲ့အရုပ်မလေးကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်.ပထမကတော့ နဂိုအိမ်ငှားတွေကျန်ခဲ့တဲ့အရုပ်တခုပါပဲဆိုပြီးနမော်နမဲ့နေခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုတွေခြောက်ခြားဖွယ်ရာတွေကို ကြုဲံတွေ့လာရချိန်မှာတော့............ File size…1.7GB / 575MB Quality…1080p BluRay 5.1CH / 720p Format…Mp4 Duration….1h 32min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hard Sub) Encoder….Thit San Khant Translated by X Cross
Switch (2013) Action, Crime, Romance အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မင်းသား Andy Lau က အေးဂျင့်ဖိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် အဓိကပါဝင်ထားပါတယ်။သိပ္ပံနည်းနည်းဆန်တဲ့တရုတ်အက်ရှင်ကားလေးတွေအများစုကပေါသလိုလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့အခုကားလေးကိုတော့မပေါဘူးလို့မထင်ပါနဲ့၊ အခုကားလေးလည်းပေါတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ပေါပေမဲ့တော်တော်ကြည့်‌လို့ကောင်းနေတာဆိုတော့ ပေါကောင်းလေးပေါ့။ဒါပေမဲ့ပေါတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံတကာပရိသတ်ရဲ့အမြင်မှာပေါနေတာမျိုး‌ပေါ့ဗျာ၊ ထောက်ပြစရာလစ်ဟာတာတွေ၊ ဟိုဟာတွေ ဒီဟာတွေ ဘာညာကွိကွ ဘလာဘလာဆိုပြီး ပေါကားလို့သတ်မှတ်ခံရတာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့အရမ်းကြီးငါ့အချိန်တွေသက်သက်ဖြုန်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်မယ့်ကားကောင်းလေးပါ။ နိုင်ငံကြီးသုံးနိုင်ငံပေါင်းကားဆိုတော့ ဗြိတိသျှရော တရုတ်ရော ဂျပန်ရောက စကီလန်းလန်းလေးတွေကိုကြည့်ရမယ်၊ ပိုပြီးကျစ်လျစ်အောင်လုပ်ရင်‌ရှယ်ကောင်းမယ့်ဇာတ်ကွက်ရှိနေတာရယ် အထဲက CGI တွေက ၂၀၁၃ နဲ့ဆိုအရမ်းကြီးမဆိုးနေတာရယ်ကတော့ ဒီကားလေးကို အဓိကကြည့်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်စေတဲ့အချက်ပါပဲ။အက်ရှင်ကားဆိုတဲ့အတိုင်း အက်ရှင်ကတော့ တကယ်အပြည့်အဝကိုပါတာပါ၊ အာရှမျက်စိနဲ့ဆိုကြည့်လို့တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဟိုးဒဏ္ဍာရီတည်းကနှစ်ပိုင်းကွဲနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ပန်းချီကားတစ်ကားရဲ့အပိုင်း ၂ ပိုင်းကို သူပြိုင်ကိုယ်နိုင်အပြိုင်လုကြမယ့် ဗြိတိသျှ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်‌သုံးနိုင်ငံပေါင်းကားလေးဖြစ်ပြီး ဒီထဲကအဓိကအေးဂျင့် ရှောင်ဂျင်ဟန်ရဲ့အက်ရှင်ကြမ်းကြမ်းတွေ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အင်္ဂလန်ဂျက်မတွေရဲ့ အက်ရှင်‌ကောင်းကောင်းတွေကို အာရှမျက်စိလေးနဲ့ခံစားဖို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Switch ဆိုတဲ့အက်ရှင်ကားကောင်းလေးကိုညွှန်းလိုက်ရပါတယ်။ File size…(2.3 GB)/(1.2 GB) Quality….BluRay 1080p ...
Odd Thomas (2013) Odd Thomas (2013)IMDb - 6.8CM ပရိသတ်ကြီးရေခင်ဗျားတို့မှာ အများနဲ့ မတူ၊ သဘာ၀နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခု ရှိနေမယ် ဆိုပါစို့ စိတ်ဖတ်နိုင်တာတို့ ၊ ကိုယ်ဖျောက်နိုင်တာတို့ ၊ အချိန်ခရီးသွားနိုင်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးဗျသေခြင်းတရားကို မြင်နိုင်ခြင်းပါ ရှင်းအောင်ပြောရရင် နာနာဘာ၀တွေကို မြင်နိုင်ခြင်းပေါ့အဲဒီအစွမ်းရှိနေရင် ခင်ဗျားတို့ ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်လိုလူကတော့ အဲဒီအစွမ်းသာရှိနေရင် လောကကြီးမှာ နေနိုင်မယ်မထင်ဘူး ဘ၀မှာ သေမှာထက်ကြောက်တာ သရဲပဲဗျ :3သိုပေမဲ့ Odd Thomas ဆိုတဲ့ လူကတော့ ဒီစွမ်းရည်နဲ့ အကျွမ်းတ၀င်ရှိနေပုံပါပဲသူက အားလုံး အမြင်မှာတော့ သာမန်လူ အညတရ စားဖိုမှူး တစ်ယောက် ပတ်၀န်းကျင်မှာ အများနည်းတူ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်သူပေါ့မတူတာတစ်ခုကတော့ အမှောင်လောက က သာမန်မဟုတ်တဲ့ အရာတွေကို မြင်နေနိုင်တဲ့ သူရဲ့ မြင်ကွင်းပါပဲတစ်ခါတစ်ရံ နာနာဘာ၀တွေက တရားမျှတမှုအတွက် သူ့ထံရောက်လာကြသလို အကူအညီရဖို့အတွက်လည်း အိပ်မက်တွေ ပေးလေ့ရှိကြတယ်ဒီလိုတွေထဲမှာမှ ထူးခြားတာကတော့ Bodachs လို့ ခေါ်တဲ့ မကောင်းတဲ့လူနောက် လိုက်တဲ့ အမှောင်လောက သတ္တဝါဆိုးတွေပါပဲ သူတို့က ...
Dark Skies (2013) Dark Skies (2013)=============IMDb Rating - 6.3/10ကောင်းကင်ကြီးတွေ မည်းတက်လာလိုက်တာ... ငှက်တွေအကောင်သုံးရာလောက်ရှိမယ်။ဒန်နီယယ်ရဲ့အိမ်ကို ဝင်တိုက်နေတာ ကြက်သီးထချင်စရာကြီး။ အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေလည်း အကုန်ပျောက်ကုန်လို့ရဲစခန်းခေါ်ပြန်တော့လည်း ဒီအိမ်က ကလေးက ခြေဆော့လက်ဆော့ရှိလို့နေမှာပါဆိုပြီး မှတ်ချက်ပေးသွားပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအိမ်မှာ ပစ္စည်းတွေကျကွဲ၊ လူတွေလည်း အိပ်နေရင်းလမ်းထလျှောက်၊ အိပ်ရာကနိုးလာရင် ဒဏ်ရာတွေရနေကြတာ အပြင်လူတွေမသိရှာဘူး...အပြင်လူတွေမသိသလို သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မသိကြဘူး။....ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ရတာဟာ ဒန်နီယယ်တို့မိသားစုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်.... ကျိန်စာသင့်နေတဲ့မိသားစုလေးအဖြစ်ကနေ ဘယ်လောက်ထိတုန်လှုပ်ချောက်ခြားဖွယ်ကောင်းပြီး ပဟေဠိဆန်သွားမလဲဆိုတာကို ဒီကားလေးမှာကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းကို JoJoVa မှရေးသားပေးပြီး၊ ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူများကတော့ JoJoVa, Thet Hnin Su တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။) Quality – 1080p, 720p, 360p BluRayDuration - 1hr 37minSubtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Horror, Sci-Fi, ThrillerSource : ...
Redemption (Hummingbird) (2013) Redemption (Hummingbird) (2013)===========================IMDb Rating - 6.2/10ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းဆရာနဲ့ ဒါရိုက်တာက ခင်ဗျားတို့ အသဲစွဲကြိုက်ကြတဲ့ Peaky blindersရဲ့ creatorနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းဆရာ ဖြစ်တဲ့ Steven Knight ။ ဒီကားက သူ့ရဲ့ ပွဲဦးထွက် ဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ကား။မင်းသားက ဂျေဆန်စတက်တန်။ 2000ပြည့်နှစ်နဲ့ အနီးတစ်ဝိုက်ကာလတွေမှာ ကြီးပျင်းလာတဲ့ သူတွေအတွက် အနောက်တိုင်းအက်ရှင်ဆို သူ့ကားတွေပဲ ပြေးကြည့်ကြတာများတယ်။ The Transporterတို့ ဘာတို့ဆို ငယ်ဘ၀က အသည်းစွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့ ဂျေဆန့်ထုံးစံအတိုင်း သူက အထူးတပ်ဖွဲ့က စစ်သားဟောင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းကောင်။ နောက် စစ်ရာဇ၀တ် ‌ကျူးလွန်မိပြီး အဲဒီစိတ်နဲ့ အရက်သမား ဖြစ်သွားတယ်။စစ်ထွက် အရက်သမားဟာ အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ လန်ဒန်မြေအောက် လောကနဲ့ သွားရှုပ်မိတဲ့အကြောင်း‌ပေါ့။Peaky Blindersရဲ့ Creatorက ရိုက်ကူး ရေးသားထားတာဆိုတော့ အက်ရှင်ကားပေမဲ့ အက်ရှင်ခန်းတွေကို တော်သင့်ရုံပဲထည့်ပြီး ဇာတ်ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်ဖိုရအောင်တော့ ရေးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ PBဖန်တွေလည်းကိုယ့်ကားCreatorရဲ့ ပွဲဦးထွက်ကားအနေနဲ့ မြည်းစမ်းကြည့်သင့်ပြီး ဂျေဆန်စတက်တန် ဖန်တွေအတွက်လည်း သူ့ရွှေခေတ်နှောင်းကို ပြန်ခံစားရစေမယ့် ကားဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ Quality – 1080p, 720p, 360p BluRayDuration - 1h 40minSubtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : ...
(18+)Nasha(2013) (18+) Nasha (2013) --------------------- ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မှီးကောင်ပေါက်စကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ၃၀ဝန်းကျင် ရင့်ကျက်နေတဲ့လှလှပပ ဆရာမလေးတို့ကြားက မေတ္တာတရားကိုချပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပါပဲ. တချို့အချစ်တွေကျမစွဲလန်းသင့်ဘူးဆိုတာကို နည်းနည်းပညာပေးထားတာတွေလဲပါတော့ပေါ့ဗျာ...ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ------------------ ဆာဟေးတို့ဆိုတာ သူတို့မြို့ရဲ့ကောလိပ်မှာသိပ်ဆိုးတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ.....စစနောက်နောက်နဲ့ လုံးဝမျက်နှာပိုးမသတ်လို့ကျောင်းအုပ်ကြီးခဏခဏဒဏ်ပေးရတဲ့လူဆိုးအဖွဲ့ပေါ့.တနေ့ကျ သူတို့ရဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်လှုပ်ရှားမှုအတွက် အနီတာဆိုတဲ့ဆရာမလေးတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်.အနီတာက မိန်းမလှပေါ့. မနက်ဆိုဘောင်းဘီတိုနဲ့ပုံမှန်ပြေးတယ်.ခန္ဓာကိုယ်အဆစ်အပေါက်ကလဲပြောစရာမရှိတော့ ကျောင်းကဆာဟေးတို့အဖွဲ့ငမ်းကြတာပေါ့ဗျာ.. ဒါပေမယ့်ဆာဟေးကတော့စည်းတခုကျော်မိသွားတယ်. အဲ့ဒါကတော့ အဲ့ဒီဆရာမကိုတဏှာစိတ်အပြင် ချစ်စိတ်ဝင်မိသွားတာပါပဲ...သူနဲ့ဆရာမဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားစေချင်ပါတယ်.......လူငယ်ကားတွေသဘောတရားအရတချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ က္ကထ္ထိယမလေးတွေရဲ့လှပတဲ့နေရာတချို့ လှစ်ဟပ်ပြသထားတာအပြင်ချစ်မှုရေးရာဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့ကြောင့် အသက်၁၈နှစ်အောက်မကြည့်သင့်ပါFile size…1.85GB / 906Mb / 465MB Quality…1080p WEB Rip DD+5.1 / 720p / 480p Format…Mp4 Duration….2h 2mins Subtitle….Myanmar Subtitle (Hard Sub) Encoder….YK Translated by YK